" ပွိတ်တာဖွဈ ဈေးရောငျးနညျး " - Tameelay
” ပွိတ်တာဖွဈ ဈေးရောငျးနညျး “
မွတျစှာဘုရား လကျထကျတျောက ရာဇဂွိုလျပွညျမှာ ဈေးသညျအမြိုးသမီး လေးယောကျ ရှိပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ဈေးရောငျးမှုဟာ မှနျကနျမှု မရှိပါဘူး ။
အလေး ခိုးသလို စဉျးလဲကောကျကဈြတဲ့ နညျးတှနေဲ့ ရောငျးတော့ စီးပှားရေးတှကေ ခဏလေးနဲ့ တိုးတကျသှားပွီး ခွံကွီး ၊ အိမျကွီးတှနေဲ့ ဖွဈကုနျကွတယျ ။
အဲဒီအမြိုးသမီးလေးယောကျဟာ စီးပှားရေးတှေ အဆငျပွဆေဲ ကာလမှာပဲ အကွောငျး မယျမယျရရ မရှိပဲ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ ကှယျလှနျကုနျကွတယျ ၊
ကှယျလှနျပွီး ဘယျရောကျသှားသလဲဆိုတော့ ကြုံးမွို့ရဲ့ အပွငျဘကျနားမှာ ဗွိတ်တာမတှေ သှားဖွဈပါသတဲ့ ။
လူ့ပွညျမှာကနျြခဲ့တဲ့ လငျယောကျြား လေးယောကျက မကွာခငျမှာ ဇနီးငယျတှေ ကောကျယူပွီး သူတို့ရှာဖှခေဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး ခံစားနတော တှရေ့တော့ . . . ဗွိတ်တာဖွဈလို့ ဆငျးရဲရတဲ့အထဲ လုပျရကျလခွေငျး ဆိုပွီး ပိုပွီး စိတျဆငျးရဲခွငျး ဖွဈကွရတယျ ။
ဒီအကွောငျးကို မွတျစှာဘုရားထံ မေးမွနျးတဲ့ အခါ . . . မွတျစှာဘုရားက ဒါယကာတို့ ဒီအသံဟာ သငျတို့ကို အန်တရာယျ ပွုမယျ့ အသံ မဟုတျပါဘူး ၊ ဗွိတ်တာ မလေးယောကျ ဆငျးရဲခွငျးတှေ နှိပျစကျလို့ အျောနကွေတာ ဖွဈတယျလို့ မိနျ့တျောမူပွီး ဖွဈကွောငျးကုနျစငျကို ဟောပွပါတယျ ။
ဒီခတျေမှာလညျး တဈခြို့ပုဂ်ဂိုလျတှဟော စဉျးလဲ ကောကျကဈြတဲ့ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ဈေးရောငျးကွတာတှေ ရှိပါတယျ။
ကားကို လိမျရောငျးတာ ၊ ထီကို လိမျရောငျးတာ ၊ ကွကျသားကို ရထေိုးရောငျးတာ ၊ TV လိမျရောငျးတာ ၊ဈေးရောငျးသူက ကိုယျကောကျကဈြလိုကျတာကို ဈေးဝယျသူ မသိဘူး ဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ဟုတျလှပွီ ထငျနမှောပါ ။
ဒါပမေယျ့ ကနျြတဲ့သူတှသေူ မသိရငျနမေယျ ၊ ဈေးရောငျးသူ ကိုယျတိုငျကတော့ သိနခေဲ့ပါပွီ ။ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူဟာ မဟုတျမမှနျဘူး ဆိုတာ သိလြှကျနဲ့ ပွုမူတယျ ဆိုတာ ကိုယျရထားတဲ့ လူ့ဘဝကို လုံးဝ တနျဖိုးမထားတာပါ ၊
ကံဆိုတာ ပွုပွီးရငျ ပွီးမွောကျသှားတာပါ ။ ဘာမှ ပွနျလုပျလို့ မရပါဘူး ၊ မွောကျသှားတဲ့ကံက အခှငျ့အခါသငျ့ရငျ ပွနျ အကြိုးပေးတော့မှာပါ ။ ကောကျကဈြစဉျးလဲတဲ့ ကံတှမြေားရငျ မြားသလောကျ အကြိုးပေးမှာပါ ။
ကိုယျက မှနျမှနျကနျကနျ ဈေးရောငျးခဲ့ရငျ ကိုယျထားခဲ့တဲ့ မတ်ေတာ ၊ စတေနာတှေ ၊ ကိုယျပွုခဲ့တဲ့ ကံတှကေလညျး အလကားနမှော မဟုတျပါဘူး ၊ သူ့အကြိုးအားလြျော စှာ တုံနျ့ပွနျမှာပါ ၊
၁။အမကွေီ့း မနေ့တေယျဆိုတာ. . .ငှရေဖို့ အဓိက ၊ ပစ်စညျးဥစ်စာ ရဖို့အဓိက ၊ ရာထူး အာဏာရဖို့ အဓိက ၊ အောငျမွငျကြျောကွားဖို့ အဓိက. . . . အဲသလို နှလုံးသှငျးပွီး မသမာတဲ့ နညျးနဲ့ ၊ ကောကျကဈြစဉျးလဲတဲ့ နညျးနဲ့ ၊ ဒုစရိုကျနညျးနဲ့ စီးပှားရှာနကွေတာပါ ။ အဲဒီလို ပုဂ်ဂိုလျမြိုးတှေ သရေငျ ဗွိတ်တာဖွဈရငျဖွဈ ၊ မဖွဈရငျ အပါယျငရဲ ကမြှာပါ ။
၂။နောကျဒုတိယက အသငျ့အတငျ့ မနေ့တေယျ ဆိုတာ . . .ကာမဂုဏျအာ ရုံတှမှော စိတျညှတျပွီး ကုသိုလျ ကောငျးမှု ပွုဖို့ ၊ တရားအားထုတျဖို့ မနေ့တောပါ ၊
ကိုရီးယား ဇတျကားလေး ကွညျ့ပွီး မနေ့တော ၊ဘောလုံးပှဲ ကို ည ၁ ၊ ၂ နာရီထိ စောငျ့ကွညျ့ပွီး မနေ့တော ၊ မင်ျဂလာဧညျ့ခံပှဲတှမှော ငါ့ဝတျစားဆငျဆငျမှုက သူတို့ထကျ သာတယျ ဆိုပွီး သာယာပွီး မနေ့တော ၊ငါ့ဘဝ မှာ ” ကိုကိုသာ အဓိ က ” ဆိုပွီး ကိုကို အတှကျသာ အခြိနျကုနျပွီး တရားအားထုတျဖို့ မနေ့တော ။
ဒီမခွေ့ငျးတှကေ အပါယျငရဲကို ကစြတေတျတဲ့ မခွေ့ငျးတော့ မဟုတျပါဘူး ၊ ဒါပမေယျ့ သံသရာရှညျပွီး နိဗ်ဗာနျနဲ့ ဝေးစတောပါ ။
၃။နောကျ တတိယကမမသေ့ငျ့တာ မနေ့တေယျ ဆိုတာ ကတော့ . .တရား ရိပျသာ ဝငျတဲ့အခါ အမှတျတှေ ကြဲကြဲ နတောကို ပွောတာပါ ။ တရားထိုငျတဲ့အခါ စိတျတှကေ တောငျရောကျ မွောကျရောကျ အိမျရောကျ ရုံးရောကျ နဲ့ သမာဓိတှေ ကြဲနတောပါ ။
ဒီမခွေ့ငျးက ငရဲကို ကစြတေတျတဲ့ မခွေ့ငျး မဟုတျပါဘူး ၊ ဒါပမေယျ့ တရားအတှတှေ့ေ နှေးနတေတျပါတယျ ။ မခွေ့ငျးသုံးမြိုးထဲမှာ လူသား တဈယောကျအနနေဲ့ လုံးဝ မရှိသငျ့တဲ့ မခွေ့ငျးကတော့ ပထမမခွေ့ငျး ပါ ။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတဈယောကျရဲ့ ပနျးတိုငျအစဈဟာ နိဗ်ဗာနျ ပါ ။ နိဗ်ဗာနျ မရသေးရငျတောငျ ဘဝကို ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး နသှေားရဖို့က အဓိကပါ ။ ပစ်စညျးတှတေော့ ပေါပါရဲ့ ၊ ဒါပမေယျ့ ဘဝက မငွိမျးခမျြးဘူးဆိုရငျ ဘဝက အဓိပါယျ မရှိလှပါဘူး ။
ဘာပဲပွောပွော ဗွိတ်တာဖွဈတဲ့ စီးပှားရှာနညျးတှေ ကိုတော့ အထူးရှောငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ မခွေ့ငျးသုံးမြိုးကို သဒ်ဓမ်မံရံသီဆရာတျောကွီးရဲ့ လင်ျကာလေးနဲ့ ကပျမှတျထားလိုကျရအောငျပါ ။
ဒုစရိုကျသာ ပွုလုပျခါ နတောမနေ့မေညျ ၊ကာမဂုဏျမှာ စိတျညှတျခါ နတောမနေ့မေညျ ၊ဘာဝနာမှာ စိတျလှတျခါ နတောမနေ့မေညျ ၊
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က ရာဇဂြိုလ်ပြည်မှာ ဈေးသည်အမျိုးသမီး လေးယောက် ရှိပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ဈေးရောင်းမှုဟာ မှန်ကန်မှု မရှိပါဘူး ။ အလေး ခိုးသလို စဉ်းလဲကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ ရောင်းတော့ စီးပွားရေးတွေက ခဏလေးနဲ့ တိုးတက်သွားပြီး ခြံကြီး ၊ အိမ်ကြီးတွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်ကြတယ် ။
အဲဒီအမျိုးသမီးလေးယောက်ဟာ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေဆဲ ကာလမှာပဲ အကြောင်း မယ်မယ်ရရ မရှိပဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကွယ်လွန်ကုန်ကြတယ် ၊
ကွယ်လွန်ပြီး ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတော့ ကျုံးမြို့ရဲ့ အပြင်ဘက်နားမှာ ဗြိတ္တာမတွေ သွားဖြစ်ပါသတဲ့ ။
လူ့ပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ လင်ယောက်ျား လေးယောက်က မကြာခင်မှာ ဇနီးငယ်တွေ ကောက်ယူပြီး သူတို့ရှာဖွေခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ခံစားနေတာ တွေ့ရတော့ . . . ဗြိတ္တာဖြစ်လို့ ဆင်းရဲရတဲ့အထဲ လုပ်ရက်လေခြင်း ဆိုပြီး ပိုပြီး စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်ကြရတယ် ။
ဒါကြောင့် ကျုံးအပြင်ဘက်ကနေ မြို့ထဲကလူတွေ ကြားအောင် အသံဆိုးကြီးတွေနဲ့ လှမ်း ၊ လှမ်းအော်ပါတော့တယ် ။ ဒီအကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားထံ မေးမြန်းတဲ့ အခါ . . . မြတ်စွာဘုရားက ဒါယကာတို့ ဒီအသံဟာ သင်တို့ကို အန္တရာယ် ပြုမယ့် အသံ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဗြိတ္တာ မလေးယောက် ဆင်းရဲခြင်းတွေ နှိပ်စက်လို့ အော်နေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ မိန့်တော်မူပြီး ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ဟောပြပါတယ် ။
ဒီခေတ်မှာလည်း တစ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဈေးရောင်းကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကားကို လိမ်ရောင်းတာ ၊ ထီကို လိမ်ရောင်းတာ ၊ ကြက်သားကို ရေထိုးရောင်းတာ ၊ TV လိမ်ရောင်းတာ ၊ဈေးရောင်းသူက ကိုယ်ကောက်ကျစ်လိုက်တာကို ဈေးဝယ်သူ မသိဘူး ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီ ထင်နေမှာပါ ။
ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေသူ မသိရင်နေမယ် ၊ ဈေးရောင်းသူ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သိနေခဲ့ပါပြီ ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူဟာ မဟုတ်မမှန်ဘူး ဆိုတာ သိလျှက်နဲ့ ပြုမူတယ် ဆိုတာ ကိုယ်ရထားတဲ့ လူ့ဘဝကို လုံးဝ တန်ဖိုးမထားတာပါ ၊
ကံဆိုတာ ပြုပြီးရင် ပြီးမြောက်သွားတာပါ ။ ဘာမှ ပြန်လုပ်လို့ မရပါဘူး ၊ မြောက်သွားတဲ့ကံက အခွင့်အခါသင့်ရင် ပြန် အကျိုးပေးတော့မှာပါ ။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ ကံတွေများရင် များသလောက် အကျိုးပေးမှာပါ ။
ကိုယ်က မှန်မှန်ကန်ကန် ဈေးရောင်းခဲ့ရင် ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ မေတ္တာ ၊ စေတနာတွေ ၊ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေကလည်း အလကားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ သူ့အကျိုးအားလျော် စွာ တုံန့်ပြန်မှာပါ ၊
၁။အမေ့ကြီး မေ့နေတယ်ဆိုတာ. . .ငွေရဖို့ အဓိက ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ရဖို့အဓိက ၊ ရာထူး အာဏာရဖို့ အဓိက ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားဖို့ အဓိက. . . . အဲသလို နှလုံးသွင်းပြီး မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ နည်းနဲ့ ၊ ဒုစရိုက်နည်းနဲ့ စီးပွားရှာနေကြတာပါ ။ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ သေရင် ဗြိတ္တာဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ မဖြစ်ရင် အပါယ်ငရဲ ကျမှာပါ ။
၂။နောက်ဒုတိယက အသင့်အတင့် မေ့နေတယ် ဆိုတာ . . .ကာမဂုဏ်အာ ရုံတွေမှာ စိတ်ညွှတ်ပြီး ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြုဖို့ ၊ တရားအားထုတ်ဖို့ မေ့နေတာပါ ၊
ကိုရီးယား ဇတ်ကားလေး ကြည့်ပြီး မေ့နေတာ ၊ဘောလုံးပွဲ ကို ည ၁ ၊ ၂ နာရီထိ စောင့်ကြည့်ပြီး မေ့နေတာ ၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွေမှာ ငါ့ဝတ်စားဆင်ဆင်မှုက သူတို့ထက် သာတယ် ဆိုပြီး သာယာပြီး မေ့နေတာ ၊ငါ့ဘဝ မှာ ” ကိုကိုသာ အဓိ က ” ဆိုပြီး ကိုကို အတွက်သာ အချိန်ကုန်ပြီး တရားအားထုတ်ဖို့ မေ့နေတာ ။
ဒီမေ့ခြင်းတွေက အပါယ်ငရဲကို ကျစေတတ်တဲ့ မေ့ခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် သံသရာရှည်ပြီး နိဗ္ဗာန်နဲ့ ဝေးစေတာပါ ။
၃။နောက် တတိယကမမေ့သင့်တာ မေ့နေတယ် ဆိုတာ ကတော့ . .တရား ရိပ်သာ ဝင်တဲ့အခါ အမှတ်တွေ ကျဲကျဲ နေတာကို ပြောတာပါ ။ တရားထိုင်တဲ့အခါ စိတ်တွေက တောင်ရောက် မြောက်ရောက် အိမ်ရောက် ရုံးရောက် နဲ့ သမာဓိတွေ ကျဲနေတာပါ ။
ဒီမေ့ခြင်းက ငရဲကို ကျစေတတ်တဲ့ မေ့ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် တရားအတွေ့တွေ နှေးနေတတ်ပါတယ် ။ မေ့ခြင်းသုံးမျိုးထဲမှာ လူသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝ မရှိသင့်တဲ့ မေ့ခြင်းကတော့ ပထမမေ့ခြင်း ပါ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းတိုင်အစစ်ဟာ နိဗ္ဗာန် ပါ ။ နိဗ္ဗာန် မရသေးရင်တောင် ဘဝကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေသွားရဖို့က အဓိကပါ ။ ပစ္စည်းတွေတော့ ပေါပါရဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် ဘဝက မငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုရင် ဘဝက အဓိပါယ် မရှိလှပါဘူး ။
ဘာပဲပြောပြော ဗြိတ္တာဖြစ်တဲ့ စီးပွားရှာနည်းတွေ ကိုတော့ အထူးရှောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ မေ့ခြင်းသုံးမျိုးကို သဒ္ဓမ္မံရံသီဆရာတော်ကြီးရဲ့ လင်္ကာလေးနဲ့ ကပ်မှတ်ထားလိုက်ရအောင်ပါ ။
ဒုစရိုက်သာ ပြုလုပ်ခါ နေတာမေ့နေမည် ၊ကာမဂုဏ်မှာ စိတ်ညွှတ်ခါ နေတာမေ့နေမည် ၊ဘာဝနာမှာ စိတ်လွတ်ခါ နေတာမေ့နေမည် ၊
“ဘဝမှာ ကွီးပှားတိုးတကျခငျြရငျကံကိုခညျြး အကွှငျးမဲ့ပုံယုံထားလို့ မရဘူး”(ပါခြုပျဆရာတျောကွီး)